बुढेशकालमा पनि यौनजीवन कसरी सुखमय बनाउने ?
काठमाडौं, पुस १५ । उमेर ढल्कँदै गएपछि यौनजीवनको आनन्द कम हुँदैजान्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ । जसकारण दाम्पत्य जीवन नै जोखिममा पर्नसक्ने भनिन्छ । विस्तृतमा...
काठमाडौं । मालिण्डो एयरबाट मलेसियाको यात्रामा रहेका एक बंगलादेशीले विमानभित्रै निवस्त्र भएर हस्तमैथुन गर्न थालेपछि पक्राउ परेका छन् ।
मोवाइमा 'पोर्न फिल्म' हेर्ने गर्नुभएको छ ? सावधान ! यस्ता छन् डरलाग्दा कारण
'भाइरल बनेको सेक्स भिडियो' : जसको कारण उनले आत्महत्या गरिन् ...
बीबीसी । यो कथा टिजियाना कैटोनको हो, जसले सेक्स भिडियो भाइरल भएका कारण आत्महत्या गरिन् ।
किन यी दिनमा श्रीमान–श्रीमतीले सहबास गर्नुहुदैन ?
भनिन्छ महिला र पुरुष छुटिएर बस्नै सक्दैनन । तर विवाह पछि केही यस्ता दिनहरु हन्छन जसलाई स्त्री र पुरुषको समागमका लागि उचित मानिदैन । तर विभिन्न धर्मशास्त्रले दिएको जानकारी अनसार ती दिनहरु पुरुष र स्त्री समागम नराखेकै राम्रो । ती कस्ता दिनहरु हुन् त थाहा पाउनुहोस् स्त्री र पुरुषले कुन दिन त्यस्तो सम्बन्ध राख्नु हुँदैनः
सेक्सलाई लिएर गरिएको अनुसन्धानमा निस्कियो यस्तो आश्चर्य लाग्दो निष्कर्ष
एजेन्सी–संभोगलाई लिएर एक रिसर्चले यस्तो रहस्य बाहिर ल्याएको छ जसले तपाईलाई आश्चर्यमा पार्नसक्छ । संभोगको दौरान हर्मोन उत्पन्न हुन्छ । उक्त हर्मनले अध्यात्ममा बढावा दिने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । यसका कारण पनि भगवानप्रति आस्था बलियो हुन्छ ।
हस्तमैथुन गर्नेहरुले जान्नैपर्ने अत्यन्त जरुरी कुराहरु...
बीबीसी । हस्तमैथुनलाई लिएर मानिसमा केही किसिमका भ्रम छन् । कतिपय मानिस यसलाई गलत मान्छन् । कतिपय सही । तर, विज्ञान यसलाई गलत मान्दैन । हस्तमैथुनलाई स्वास्थ्यका लागि सामन्य र राम्रो मानिन्छ ।
प्लाष्टिकको प्रयोग गरेर सेक्स गरेपछि...
एजेन्सी । भियतनाममा एक जोडीले प्लाष्टिक प्रयोक गरेर सेक्स गर्दा गम्भीर ‘सेक्स इन्जुरी’ भएको छ । यौनांगमा गम्भिर चोट देखिएपछि उनीहरुलाई हस्पिटलमा भर्ना गरिएको छ । उनीहरुले पहिलो पटक सेक्स गर्नका लागि प्लाष्टिकको प्रयोग गरेका थिए ।